Ihe nche nche nke March maka Galaxy Tab S7 dị ugbu a | Gam akporosis
Otu ihe akaebe ọzọ nke Samsung etinyela batrị na usoro nke mmelite, anyị nwere ya na akụkọ taa. Samsung ka malitere nche patch maka ọnwa nke Machị maka Galaxy Tab S7 na Galaxy S7 +.
A na - ewepụta mmelite a na ụbọchị mbụ nke Machị, ihe na - esitekarịghị, mana ọ dị ka ọ bụ ọ ga-aghọ ezigbo agwa site na ụlọ ọrụ Korea. Nwelite ohuru a gunyere otu n’ime oru nke batara na iPad site na mwepu nke nsụgharị nke na-ejikwa ha ugbu a, iOS 14.
Nke a bụ ọrụ ọhụrụ nke na-enye onye ọrụ ohere na-eji aka dee ederede ederede na ederede ozugbo. N'ihi ọrụ a, anyị nwere ike iji S Pen dee igbe ederede na-enweghị iji keyboard ebe ọ ga-agbanwe na-akpaghị aka na ederede. Mmelite a na-agụnye mmụba nke nkwụsi ike nke ihe mmetụta ihe mkpịsị aka na mmelite nche ndị ọzọ.
Samsung DeX na-enweta nkwalite site na nkwụsi ike na ndakọrịta na Dolby. Samsung Free edochila ngwa Samsung kwa ụbọchị, ọ bụ ezie na ọ ka bụ otu ihe nro nro ahụ. Mmelite a adịlarịrị na Germany, ya mere ọ bụ ụbọchị ole na ole tupu ọ rute mba ndị ọzọ ebe Samsung na-ere ma Galaxy Tab S7 na Tab S7 +.
Mbadamba zuru ezu na gam akporo
Site na itinyeghị ọrụ Google, Huawei's Matepad Pro ahapuru n ’akụkụ ahụ ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka mbadamba arụmọrụ dị elu n'ime usoro okike Android. N'ụzọ nke a, naanị emeputa na awade zuru ngwọta na mbadamba jisiri na gam akporo bụ Samsung na Galaxy Tab S7 na Galaxy Tab S7 +.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Ihe nche nche nke ọnwa maka Galaxy Tab S7 dị ugbu a
Instagram Live na-agbatị ndị sonyere na mkpokọta 4 ma gbanwee aha ya na Live Live Rooms